Dr. Achụkọ Nnamdị – hoo!haa!!
Aham bụ Dr Achụkọ Nnamdị. Abụm dọkịnta bekee, okacha mara maka anya.
Anam arụ ọrụ na General Hospital Kafanchan nke dị na Kaduna Steeti.
Abụm onye Ụmụahịị Mbieri Mbaitoli L.G.A Imo Steetị.
Alụọlam nwunye, mụtakwa ọmarichaa ụmụaka.
CORONAVAỊRỌS (ỌRỊA KORO)
*CORONAVAỊRỌS* *(CORONAVIRUS (COVID-19))* *GỊNỊ BỤ CORONAVAỊRỌS?* Coronavaịrọs bụ vaịrọs ahụrụ n’ime anụmanụ, nwere ike ị bunye mmadụ site na anụmanụ, ọ na e sikwa na mmadụ banye na mmadụ. Coronavaịrọs nwere ike ibute ọrịa dị iche iche dịka oyi nkịtị, oké nnukwu sịndrọm akụkụ okuku ume (SARS), etiti ebe ọwụwaRead More →
Ginị bụ ọrịa Retinopathy of Prematurity (ROP)? Ọrịa Retinopathy of Prematurity (ROP) bụ nsogbu anya nke n’emetụta ụmụaka amụrụ na-akaghị aka, ndị dị 2¾ pounds (1250grams) ma ọbụ dị ala, ndị amụrụ oge n’erughị izu ụka iri atọ na otu. Nwa a mụrụ ọhụrụ ipe oke mpe n’akpata ọrịa ROP.Read More →
Ọ bụrụna nwa gị anaghị eme nkeọma n’ụlọ akwụkwọ, biko kpọrọ ya gaa na ezigbo ụlọ ọgwụ anya ka dọkịnta anya nyuochaa ya anya maka nsogbu anya ndi bekee n’akpọ “refractive error” nwere ike ime ụmụaka n’agba ọnyụ paa n’ụlọ akwụkwọ.Read More →
Aham bụ Dọkịnta Achụkọ NnamdịRead More →
ỌRỊA ÍRÍ (MENINGITIS) NKE ỌHỤRỤ BATARA NAIJIRỊA. Ọrịa írí ọhụrụ nke anakpọ Cerebrospinal Meningitis (CSM), Neisseria Meningitides ụdị Ch (type C) abatama obodo anyị bụ Naijirịa nke mbụ. USORO MGBOCHỊ ỌRỊA ÍRÍ ỌHỤRỤ NKEA. (1) Izere njubiga ókè nke mmadụ. (2) Ihi ụra ebe dị ventịlet. (3) Izere nso naRead More →
카지노사이트 on Haiti – Vertières : «Asachiela otu usoro n’akụkọ mba ala a. Eferela n’usoro ọhụrụ» Jovenel Moïse
카지노사이트 on Anyị ga ekpochapụ ndi nile na-achọghị ịdịnotu Naịjiriya-Buharị
카지노사이트 on ASỤSỤ IGBO AGAGHỊ ANWỤ N’ANỊỌMA-OKỌWA
카지노사이트PPAP3.COM on ỌHỊA
N’IME ỌRỊA KORO, NDỊ ỤLỌ NZUKỌ OMEBEIWU NTA EKEELA ONWE HA ỤGBỌALA TOYOTA NARỊ ANỌ NKE ỌNỤ AHỊA NKE ỌBỤLA KARỊRỊ $35,000